Jabulela nge-Freeware inxenye yendiza (3)
umbuzo Jabulela nge-Freeware inxenye yendiza (3)
I-1 unyaka we-6 iintsuku ezidlulileyo #945 by DRCW
Jabulela nge-Freeware moya (inxenye 3)
Nantsi elo thuba lokugqibela kwesi sihloko (kwakhona kwakhona nceda ufunde inxenye 1 ne-2)
Ngoko senze i-KLM 737 ngakumbi njengeenqwelo zokuhlawula kodwa kukho ezinye izinto esinokuzenza. Ukuba ulandele inxenye 1 &
I-2, ngoko ulayishe i-717-200 kwiwebhusayithi yeRioooo.com. Ngolu fakelo, ngokuzenzekelayo wongeze i-FDSFX pop-
apho kukuvumela ukuba ube nabasebenzi ebhodini ngokusebenzisa ukutshintsha kwiphaneli. Ngokuqinisekileyo ukuba usebenzisa i-FS-Passenger
ngoko kuya kubonakala kukuphazamiseka nangona kukho amaxesha apho ufuna ukuhamba ngaphandle kweFSP.
Masithi uhlala usebenzisa i-FSP kwaye ungaboni mfuneko yokusebenzisa i-FDSFX pop-up, Ungahlala uhlela kwaye utshintshe i-audio nganye
utshintsho lomntu ngamnye kwiifayile zomculo okanye nayiphi na ifomathi ye-MP3. Emva kokuba i-717-200 ifakiwe, ukufaka ngokuzenzekelayo kufakwe okuphambili
i-audiophile kwifolda ephezulu yeefayile. Emva kokuba uvula ifolda ephezulu yesandi uza kubona ifayile efakwe "FDSFX". Apha zi
apho iifayile zomsindo mp3 zigcinwa:
06_T Ukuhlaselwa kwe-ON_Ann
17_Buqala ukuNcipha_Capt uMarcus
20_Taxi ukuya ku-Gate_Ann
Akufuneki ukuthetha ukuba uye wasebenzisa le paneli ikhwalithi yomsindo ayikho into enhle. Unokuhlambulula iifayile ezingagqibekanga nge MixPad
I-Multitrack Ukurekhoda iSoftware ikhululekile kwaye ifumaneka kumgca: www.nch.com.au/mixpad/
Cofa kwi "khuphela ukukhuphela mahala apha" icandelo.
Thatha ifayile oyifunayo ukucoca umzekelo: (18_On Approach_Ann) uze uyikopishe uze uyihlanganise kwi-Mixpad. Cofa kwimiphumo
Ikhonkco kwaye usebenzise i-Equalizer (i-Visual) ngelixa udlala i-audiophile. Tshintsha izicwangciso apho ufumana isandi esona siqhosha kwaye nqakraza
sicelo. Zama ukukhuthaza nokusika i-freq. ukufumana isandi esihle.Ukuba ufumanisa ukuba injini iyaqhayisa ukuzama ukuzama ukusika i-freq
phakathi kwe-100 kunye ne-250hz. Ukuba amaPhakamileyo aphikisayo ukuzama ukusika i-freq nge-5 kwi-7 khz uze ukhulise i-freqs ephakathi. Ukuba
Umthamo ophantsi kakhulu unako ukuwukhuphula ngokuchofoza kwi-Amplify Icon kwaye ukwandise umthamo ukuya kwi-400%. Emva kokuqakraza
kwikhaya uze ulithumele kwifolda yakho yokulanda kwiifestile. Phuma ngaphandle kweMixPad. Uya kubuzwa ukuba ufuna ukugcina "
Vula ifolda yakho yokukhuphela kwaye kuya kuba nefayile ebizwa ngokuba yi "Project default" Le fayile oyilungile. Yidonsa yakho
desktop uze uyiqambe kwakhona (18_On Approach_Ann). Ngoku unokuyikopisha uphinde unamathisele kwifolda yomsindo we-FDSFX kwaye nini
ukhuthaze ukhethe Kopisha kwaye ubeke endaweni. Ngoku sele utshintshile iifayile zangasese ezingekho phantsi kweefayile eziphezulu eziphuculweyo
Ungatshintsha zonke iifayile ezibalwe apha ngasentla kunye naliphi i-MP3 onqwenelayo. Yitsho ukuthi ufuna ukufaka endaweni (01_Gate Ambience) nge
ifayile yomculo kwilabhulali yakho ye-MP3. Uza kutsala ikopi yaloo fayile yomculo kwi desktop yakho uze uyiqambe kabusha (01_Gate
I-Ambience) uze uyikopishe uze uyihlanganise kwifolda ephezulu ye-FDFSX kwaye ukhethe ikopi kwaye uyifake indawo xa ikhuthazwa.
Phawula: Ukukhuphela kwe-MixPad kuquka inkqubo yokuguqulela iifayile yefayile ebizwa ngokuba yiNCH Suite. Ngolu hlelo ungawuguqula
I-MP3 kwiintshumayelo ze-Wave ezenza kube lula ukuhlela nokutshintsha nayiphi na ifayile yesandi .
Kulungile ngoku siyakongeza i-pushback ne-taxi ijubane lejubane kwi-KLM 737. Le nkqubo i-freeware eyaziwayo
Ulungelelaniso5 . Yiya kule website: flyawaysimulation.com/downloads/f...ing-gauges-
Emva kokukhutshwa ngaphambi kokuba ukhuphe idale ifayile kwifolda yakho yefayile uze uyiqambe ngokuthi "Groundhandling5" uze uyihudulele
yakho desktop. Khipha zonke iifayile kwi-download yakho kwiFoldhandling5 ifolda oyidalayo. Ngoku vula i-FSX yakho ephambili
ifolda ngoko Kopisha & Namathisela "Ukwabelana ngokubanzi5" kwifolda yakho ephezulu yeFSX. Uya kuyenza oku kanye kuphela.
Ngoku vula ifayela le-KLM 737 kwiifolda ze-FSX / ifolda yeenqwelo. Fumana iiplani Ifolda yepaneli uze uyikopishe uze unamathisele
I-RCB_Groundhandling5 IKhabhinethi yeFayile kwiFolda ye-Panel ye-KLM 737 (Lawa awona manqaku weGroundhandling5)
Kopisha kwaye Namathisela i-RCB_Groundhandling5_Sound.dll kwiFolda yePelli ye-KLM 737 (eli fayile lixelela i-FSX ukusebenzisa isandi
ukusuka kwifolda ephezulu yesandi)
Gqibela uvule ifayile ye README kwaye uya kufumana icandelo elilandelayo:
gauge02 = RCB_Groundhandling5! I-Taxispeed, 79,2,64,61
gauge04 = RCB_Groundhandling5! Iibrakes, i-146,2,56,61
Vula ifayile ye-KLM Panel.cfg kwaye icandelo eliphezulu kufuneka libukeke njengale:
window00 = Ipaneli enkulu
window01 = Ukutshintsha
Window03 = I-Panel ye-Throttle
Window04 = Iqela eliphezulu
Window05 = I-FlightDeck i-Panel SFX
Window06 = Ulawulo lwezango
Window07 = Thabatha iPhaneli
Window10 = i-EICAS
Window11 = Iqela leMini
Window12 = Ukukhawuleza okuqhelekileyo
Window14 = Iwashi
Window15 = I-Wind Gauge
Window16 = I-HSI yokugcina
Window17 = I-Altimeter yokugcina
Window18 = Isimo sengqondo sokugcina
window19 = i-Flaps Large
Window21 = I-Radio Stack
Ngakwesokudla ngaphantsi kwe Window21 = uhlobo lwe-Stack yoLwazi Window22 = Ukusetyenziselwa5
Ngoku ugoqa phantsi uze ufumane:
gauge06 = 737-400! Umsindo, 0, 409,159, 32
Ngakwesokudla phantsi kweli candelo yilapho uza kukopa kwaye unamathisele:
Tshintsha ** kwi-22 ngoko ifundeka [Window22] [/ b]
Cima // xa uqala lo mgca !!!
Ukuyivavanya: Qala i-FSX kwaye xa ulayishiwe kwi-KLM 737, cinezela iqhosha lakho le-alt (ibar ye menu kufuneka ibonakale phezulu
kwesikrini) khetha umboniso / iPhaneli yeCandelo / kwaye nqakraza kwiGroundhandling5. Qinisekisa ukuba isebenza ngokuvala i-FSX.
Iinguqu zokugqibela zoTshintsho:
Ngeenguqu esizenzayo kude kube lula ukuba uqaphele akukho sandi xa ukhetha Fasten Seatbelt & No Smoking
Oku kulungelelanisa lula kwaye ndishiye okokugqibela kuba ndifuna ukuba uqonde iindaba ze-audiophile kuqala. Ngoku ngoku siyibeke
loo ndawo uvumela ukulungisa. Okokuqala unayo inqwelo-moya kwi-FSX eqokelelwayo eqokelelwayo esebenzayo i-seatbelt kwaye akukho tshintshi yokubhema
ngeentsimbi zeentsimbi ukuze siza kuvula ukuvula enye yeefolda zeefayili. Kwakhona kwifolda ephezulu yeFSX / imikhosi /
iindiza. Fumana ifolda ye-Airbus_A321 kwaye uyivule.
Vula ifolda yesandi uze ufumane ifayile ephawulwe "isandi" uze uyivule.
Skrolela phantsi uze ukopishe uze unamathisele eli candelo kwicwecwe lakho:
Amacandelo aphezulu acacisa i-FSX kumashintshi athile abandakanyekayo.
Icandelo eliphantsi (filename = CabinAlert) litshela i-FSX ukukrazula isandi kwifayile ephezulu yeFSX.
Ngoku vula ifolda yesandi e-KLM kwaye kuya kuba nefayile ephawulwe "isandi". Vula ifayile yesandi uze uyikopishe uze unamathisele oku
amacandelo ephantsi kwoluhlu. Njalo gcina indawo phakathi kwamacandelo.
Kufuneka ube ne-tone yentsimbi xa usebenzisa oku kutshintsha.
Ndiyathemba ukuba ufunde okuninzi apha. Emva kokuba usebenzise la maqhinga uza kufinyelela kwinqanaba xa ukhupha i-freeware
moya kwaye uyifake kwi-desktop yakho, kuya kuba yinto yesibini yokwenza ezi zilungiso ngaphambi kokuba uzifake kwi-FSX. Uya kuba nako
ukutshela izinto ezithandwayo nje ngokujonga kwiifayile ze-cfg zeefowuni kunye nefowulda yefomathi ngaphandle kokukhankanya ifolda yesandi. Sifike loo mbandela
Kwizithuba ezizayo ndiza kukufundisa indlela yokufaka i-cockpit ye-2D kwiindiza ezingabandakanyi. Indlela yokongeza i-GPS / i-Autopilot /
Inomathotholo / nezinye iifestile eziphambili kwiinqwelo ezingenawo, kwaye ke indlela yokufaka i-cockpit yangempela